ငယ်ငယ်ကတည်းက မာတာမိခင်ရဲ့ ဂျင်းထည့်ခြင်းခံနေရကြောင်းကို အရွှန်းဖောက်မျှဝေခဲ့တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု - Cele Gabar
ငယ်ငယ်ကတည်းက မာတာမိခင်ရဲ့ ဂျင်းထည့်ခြင်းခံနေရကြောင်းကို အရွှန်းဖောက်မျှဝေခဲ့တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
By RainowPosted on July 6, 2020
ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းစာရင်းဝင် မင်းသမီးတစ်လက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ပါဝင်ရတဲ့ဇာတ်ကောင်တိုင်းကို စိတ်နှစ်ပြီး သရုပ်ဆောင်လေ့ရှိသူတစ်ယောက်မို့ အချိန်တိုအတွင်းမှာ မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။
သုသုကတော့ ပရိသတ်ကိုအလေးနက်ထားသူတစ်ယောက်ဖြစ်သလို သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဆိုရင်လည်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဒါရိုက်တာဏကြီးနဲ့အကြောင်းအရာတွေအပြင် ၊ အမေနဲ့ညီမဖြစ်သူတို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပျော်စရာအကြောင်းအရာတွေကို အမြဲလိုလိုမျှဝေလေ့ရှိသူပါ။ ဒီနေ့မှာတော့ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ ဂျင်းထည့်ခြင်းခံခဲ့ရကြောင်းကို အရွှန်းဖောက်ပြီး မျှဝေခဲ့ပါတယ်။
“အာလူးသီးပုံပြင်…. အမေများကိုယ့်ကိုငယ်ငယ်ကတည်းကဂျင်းထည့်ခဲ့တာ….ကိုယ်တွေစလှချင်တဲ့… (၁၅),(၁၆) နှစ်လောက်မှာ စဂျင်းထည့်တဲ့စကား “ငါ့သမီးလေးက လှပါတယ် အရွယ်မရောက်သေးလို့ပါ…မိန်းကလေးဆိုတာ (၁၈) နှစ်လောက်မှအလှစုံတာ”တဲ့….အဲ့တော့စောင့်တာပေါ့….(၁၈) နှစ်ပြည့်ဖို့….. ဟော…(၁၈) နှစ်ပြည့်ပါပြီ….ငါလှပစ်လိုက်တော့မဟဲ့ဆိုပြီးမှန်ထဲကြည့်လိုက်တော့….မှန်ထဲမှာကအာလူးသီး” ဆိုပြီးမျှဝေခဲ့ပြီး မိခင်ဖြစ်သူကို ဘာလို့မလှသေးတာလဲလို့ မေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ (၂၁) နှစ်လောက်မှ လှလာမှာ၊ ထိုမှတဆင့် ၊(၂၅) နှစ် ၊ (၃၀) နှစ်ထိ အမေ့ရဲ့စကားသာ အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲခဲ့ပြီး မှန်ထဲမှာ ကြည့်လိုက်တိုင်းတော့ အာလူးသီးရုပ်ကိုပဲ မြင်နေရတဲ့အတွက် ဒီအာလူးသီးရုပ်ကပဲ ကိုယ်နဲ့ တစ်သက်လုံးယှဉ်တွဲသွားမှာဖြစ်ကြောင်း နားလည်လိုက်ပါပြီဆိုပြီး ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ အရွှန်းဖောက်မျှဝေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ… ဆယ်လီကမ္ဘာပရိသတ်ကြီးရော ငယ်ငယ်က သုသုလို ဂျင်းထည့်ခံခဲ့ရဖူးလား မျှဝေခဲ့ပါဦးနော်။
Previous post အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်မလာခင် ပထမဆုံးအဆိုပြိုင်ပွဲမှာခံစားခဲ့ရတဲ့ခံစားချက်တွေကို မျှဝေခဲ့တဲ့ဝိုင်းလေး
Next post သာသနာဘောင်ဝင်နေတဲ့ စိန်လင်း ( Aroma ) ရဲ့ပရိသတ်တွေပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ဆွမ်းကပ်မင်္ဂလာ